Sunday April 22, 2018 - 09:57:23 in Wararka by Super Admin
Dowladda dabadhilifka Imaaraatka Carabta ayaa bilaawday in ay kala jabiso hoggaamiyaasha maamul goboleedyada iyo DF-ka xilli uu sii xoogeystay khilaafka ka dhaxeeyo maamulka Muqdisho iyo Abu Dhabi.
Cabdi Wali Max'med Gaas oo ah hoggaamiyaha maamulka isku magacaabay maamulka 'Puntland' ayaa looga yeeray wadanka Imaaraatka Carabta halkaas oo uu kulamo kula leeyahay mas'uuliyiin Imaaraat ah.
Diyaarad Gaar ah ayaa Gaas shalay ka qaaday magaalada Boosaaso, isagoo warbaahinta lahadlayay ka hor inta uusan dhoofin ayuu sheegay in uu madaxda imaaraatka kalasoo hadli doono sii wadidda tababaridda ciidamada iyo mushaar siintooda.
” Waxaan maanta u ambabaxayaa wadanka isutaga Imaaraadka Carabta oo aan u aadi doono howlo la xidhiidha arimaha ciidamada badda oo muddo tobon sano ah ay naga taageerasay Dowladda Isutaga Imaaraadka Carabta iyo difaaca dalka iyo la dagaalanka argagixisada Alshabaab iyo arrimo kale oo la xidhiidha hormarnta kaabayaasha dhaqaalaha"ayuu yiri Gaas.
Hoggaamiyaha maamulka Puntland ayaa horay u sheegay in aysan jirin doonin cid ubedeli karta kaalinta dowladda imaaraatka sidaas daraadeed ay ku dadaalayaan wanaajinta cilaaqaadka kala dhaxeeya maamulayaasha Abu Dhabi.
Khamiistii lasoo dhaafay kulan uu soo qaban qaabiyay maamulka Puntland ayaa ka dhacay Boosaaso waxaana si aad ah loogu ammaanay faragelinta dowladda imaaraatka ay kusoo sameysay soomaaliya, kulanka waxaa lagu casuumay odayaal dhaqameedyo iyo siyaasiyiin dhammaantood ku baaqayay in wanaajiyo xiriirka Imaaraatka.
Siyaasiyiin ku sugan deegaannada Puntland waxay sheegayaan in uu socdo qorshe dowladda Imaaraatka ay maamul goboleedyada uga dhaadhicinayso in ay xiriirka ujaraan DF-ka si culeys siyaasadeed loo saaro Farmaajo iyo Kheyre.
Anwar Qarqaash oo ah wasiiru dowladaha wasaaradda arrimaha dibadda UAE ayaa maalmo ka hor sheegay in khilaafka kala dhaxeeya DF-ka uu gaaray meeshii ugu xumeed isagoo Farmaajo iyo Kheyre ku eedeeyay in ay xaaladdiisa sii adkeeyeen.
Imaaraata carabta ayaa xiray saldhig melleteri oo ay Muqdisho ku lahaayeen sidoo kale waxay albaabada isugu laabeen xarun caafimaad oo ay ku lahaayeen magaalada caasimadda ah waxayna joojiyeen lacagihii mushaaraatka ahaa oo ay siin jireen Maleeshiyaadka DF-ka.